Mahabe Fanantenana ny Hoavy | Diary 2015
Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa
Mahabe Fanantenana ny Hoavy
Efa 70 taona teo ho eo izay no nisy Vavolombelon’i Jehovah teto amin’ny Repoblika Dominikanina. Lasa tsara laza izy ireo nandritra izany fotoana izany. Matetika ny olona no manatona mpitory rehefa eny amin’ny faritany ary mangataka gazety. Fandre koa ny olona miteny hoe: “Mba tiako ity fivavahana ity!” na hoe “Ianareo aloha tena manaraka izay lazain’ny Baiboly mihitsy e!”
Indray mandeha, nisy rahalahy iray nanome ny taniny mba hanorenana Efitrano Fanjakana. Rehefa hikarakara ny taratasin’ilay tany anefa izy, dia gaga fa hay efa nisoratra tamin’olon-kafa ilay izy. Nanao hosoka io olona io, ary izy indray no nanendrikendrika an’ilay rahalahy hoe mitady hangalatra ny taniny. Nampakarina fitsarana ilay raharaha. Tsy mora ilay izy satria nanana taratasy mazava ilay olona hoe misoratra amin’ny anarany ilay tany.
Nisy fotoana ilay mpitsara nanontany ny mpisolovavan’ilay rahalahy hoe miaro ny tombontsoan’iza izy. Nanazava ilay mpisolovava fa ny tombontsoan’ny fikambanan’ny Vavolombelon’i Jehovah no arovany. Hoy àry ilay mpitsara: “Tsisy iadian-kevitra ange ilay izy raha izany e. Fantatro tsara ny Vavolombelon’i Jehovah. Olona manao ny marina ireo, ka tsy hanao hosoka mihitsy, ary tsy haka zavatr’olona izany.”
Voaporofo fa nanao taratasy hosoka ilay olona, ka nanome rariny ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah ilay mpitsara. Hoy ilay mpisolovava: “Tsy maningana ny hoatran’iny eto amin’ity firenena ity. Tena manaja ny Vavolombelona foana ny mpitsara, isaky ny misy raharaha mahatafiditra azy ireo any amin’ny fitsarana.”
Tsy fantatra hoe firy ny olona tso-po mbola hianatra Baiboly, ka ho lasa mpivavaka amin’ilay tena Andriamanitra. Manao izay fara heriny aloha ny Vavolombelona eto mba hitoriana amin’izy ireny. Nitory adiny 11 tapitrisa mahery, ohatra, izy ireo tamin’ny 2013, ary nitarika fampianarana Baiboly 71 922. Nisy 9 776 ny mpisava lalana. Nahatratra 35 331 koa ny mpitory tamin’ny Aogositra 2013. Mbola mety hitombo be anefa izany satria 127 716 no nanatrika ny Fahatsiarovana.
Raha tsiahivina ny lasa, dia tamin’ny Aprily 1945 i Lennart sy Virginia Johnson no tonga teto. Alahady tamin’izay ary tamin’io izy ireo no nanomboka nitory ny vaovao tsara. Efa be no vita tamin’ny asa fitoriana sy fampianarana, hatramin’iny fotoana iny. Namela lova sarobidy izy mivady, ary tena mankasitraka an’izany ny Vavolombelon’i Jehovah eto. Faly koa ireo taranaka atỳ aoriana fa sahy nanao vivery ny ainy ireo Vavolombelona tany aloha. Mbola heverin’izy ireo ho zava-dehibe koa anefa ny ‘manazava tsara momba ny fanjakan’Andriamanitra.’ (Asa. 28:23) Tsy andrin’ireo Vavolombelona eto amin’ity nosy ity ny hanandra-peo miaraka amin’ny Vavolombelona eran-tany, ka hidera an’i Jehovah hoe: “Lasa mpanjaka i Jehovah! Aoka hifaly ny tany. Aoka hiravoravo ny nosy maro.”—Sal. 97:1.
Fampahafantarana ny JW.ORG
Olona 4 723 no nitsidika ny trano hevantsika tao anatin’ny 12 andro, tamin’ilay foara momba ny boky.
Efa ho 400 ny olona nitsidika azy io isan’andro.
Nisy 265 no nangataka hianatra Baiboly.
Olona 1 159 no natoro hoe ahoana no fampiasana ny tranonkala jw.org.
Andinin-teny ho An’ny Taona 2015
Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana
Zava-nisongadina Tamin’ny Taon-dasa
Mandroso Be ny Asa any Warwick
Sampan-draharaha Misahana ny Fanorenana Eran-tany
Baiboly Natao Hateza
Ilay Fivoriana Be Mpanatrika Indrindra Nataontsika
Fitokanana ny Sampan’i Sri Lanka
Fitantarana avy Amin’ny Firenena Maro
Mahatalanjona ny Zavatra Hitantsika
Fitoriana sy Fampianarana Maneran-tany
Ireo Tanin’i Amerika
Indray Mitopy Maso An’ny Repoblika Dominikanina
“Mbola ho Hitantsika Ihany Izy Ireo”
Nogadraina & Norarana Tsy Hitory
Nitohy ny Asa Fitoriana
Nomena Fahalalahana dia avy eo Norarana Indray
Trujillo sy ny Eglizy Katolika
Fanenjehana Nahery Vaika
Iza no Mpitarika Azy Ireo?
Nivory Foana na dia Nety ho Tratra Aza
Niaritra Izy Ireo ka Nafahana Ihany
“Tsy Nilavo Lefona Mihitsy Aho”
“Matoky An’ilay Fampanantenana Aho”
“Mbola ho Vavolombelon’i Jehovah Foana Aho”
Nalalaka ny Asa Fitoriana
Natao Hijanona Eto
Nilaina ny Mpitory Maro Kokoa
Mifankatia Izy Ireo
Fomba Niatrehana ny Fitomboana
Faritany Miteny Kreôla Fampiasa any Haïti
Horohoron-tany Tany Haïti
Nanampy Olona Maro Hiova Fo i Jehovah
Olona 22 no Niala tao Amin’ilay Fivavahana
Mpitolona Nafana Fo Sady Tsy Nino An’Andriamanitra
Marenina Voalohany Lasa Vavolombelon’i Jehovah
Lasa Misy Dikany ny Fiainako
Tsy Te Hanompo Azy Intsony Aho
Zato Taona Lasa Izay: 1915
Soratra Fandikana boky Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2015